Kedu ihe kpatara na achọghị m iji Unity? | Site na Linux
Anyị niile maara oche ọhụrụ nke Ubuntu, a Shell na Gnome akpọ Ịdị n'Otu nke ahụ mekwara ka ọtụtụ mmadụ hụ ha n'anya ma lelịa ha anya.
Ebumnuche nke post a abụghị iji mebie ya, kama ọ bụ naanị ịgwa gị ntakịrị uru na ọghọm ọ nwere site n'echiche m opekata mpe na ụdị ahụ 11.04. N'ezie, aghaghị m ikwu nke ahụ n'onwe: "Ahụrụ m ịdị n'otu n'anya" mana enwere ezigbo ihe mere m ji ghara iji ya.
1 Na-amasị m?
2 Na anaghị m amasị ya?
3 Ndị a bụ ihe ndị mere na achọghị m iji ya?
Styledị ahụ "Mac" Ọ na-amasị m mgbe niile. Mkpọchi ndị dị na elu panel, yana ngwa ngwa ngwa ngwa maka m bụ otu n'ime mkpebi kachasị aga nke ọma nke ndị na-emepụta Ịdị n'Otu. Na na na, ọ bụ otu oyiri nke Mac oS, ma enweghi ike ịgọnahụ ya na nsonaazụ ya dị ezigbo mma ma chekwaa anyị ohere na ihuenyo.
Otú ọ dị, na betas nke N'elu ugwu anyị nwere ike ịhụ na ugbu a bọtịnụ nwere njirimara Ubuntu gaa Ugbochi (ma ọ bụ nkwụnye, dị ka ị na-ahọrọ), na agbanyeghị na anwalebeghị m ya, ọ masịghị m echiche ahụ. Ma eleghị anya, m ka na-emegharị maka mmetụta na mgbe anyị pịa ya, anyị ga-enweta menu. N'adịghị Gnome-Shell, mgbe anyị kwesịrị iji Ugbochi, a na-egosi na n'elu windo na anyị nwere na-emeghe ya mere, ọ na-atụfu anya.
Na anaghị m amasị ya?
Ihe oma agbagoro m. Ihe mbụ anaghị amasị m bụ ndabara size nke Ugbochi na ihuenyo na-abụghị obosara-na ihuenyo. The mmetụta na m enweghị ohere na ileba anya na na Ugbochi Ọ bụ ụlọ mmanya buru oke ibu ma juputa na agba, ọ naghị abịa na mkpebi dị ala site na 1024 × 768.
Eziokwu nke ịbụ onye iwu iji Gbasara bụ otu n'ime ihe ndị siri ike mere na achọghị m iji Ịdị n'Otu. Enwere ike otu ụbọchị m ga-enwe ezigbo ihe PC eji atụmatụ mara mma, mana ugbu a enweghị m ya. N'ezie naanị PC na m nwere bụ ọrụ m na mgbe ụfọdụ na 1GB dị m mma. Gbasara na-achịkwa ihe niile dịka onye na-ekwu. Gini mere ha adighi eme a Ogige nchịkwa na Ịdị n'Otu ebe ị nwere ike hazi nha nke Ugbochi, nghọta na ihe niile? Ihe niile dabere Gbasara site n'ihe m hụworo na m kwughachiri m, ọ naghị efe m.
Na-ekwu okwu banyere Ugbochi Onye kwuru na m na-eji ahịhịa ahịhịa? Gini mere ha ji amanye m ka ogidesiri ya n’ebe ahu n’emegharighi? Ma otu ihe na tebụl. Gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ inwe karịa 4, ma ọ bụ enweghị nke ọ bụla? Na na nke ndabara agba m na-echeghị na ọ bụ aesthetic na niile, karịa a ọkachamara oche, ọ na-egosi ịbụ ihe ụmụaka.
Ọ bụrụ na anyị agbago ntakịrị elu, n'aka nri (mpaghara ngosi), anyị ga-ahụ na n'oge na-adịghị anya a gaghị enwe akara ngosi ọzọ. Ọ dị mma ịchọrọ iwebata ya niile na gauges, mana nke ahụ na-eme ka menus buru oke oke maka mmasị m. Na mgbakwunye, enwere m mmasị iji tray ahụ nakwa na ọtụtụ ngwa na-ebelata na ya, yabụ ga-eji ogwe aka mechie elu panel.
Anaghị m amasị ụzọ gosipụtara nhọrọ ahụ Na-agba ọsọ mgbe m pịa F2 dị elu Kedu ihe dị njọ na obere igbe ochie na akụkọ ọdịda ya?
Nke ahụ abụghị ịkọwa ụzọ a ga-esi nweta ngwa ugbu a.Lens a na-akpọ? Agbanyeghị. Ọ bụ ọtụtụ clicks na keystrokes. Na Gnome nke 2 dika imaatu, imeghe ngwa:
Useké pịa na menu Aplicaciones.
Tinye òké ahụ (na ịpịghị) Ngwa ma bugharịa ya Gedit.
Pịa na Gedit.
Nke ahụ bụ, pịa 2 na ịga ije. Ugbu a na Ịdị n'Otu:
Pịa na akara ngosi Ubuntu (ma ọ bụ na Windows).
Pịnye ihe ị chọrọ ịchọ (n'okwu a Gedit).
Foundchọta ya? Ọ dị mma, pịa akara ngosi.
Nanị ide ihe bụ nsogbu. Ma agwala m na m nwere ike itinye launcher na ya Ugbochi, n'ihi na ọ bụrụ na m tinye ihe niile m na-eji ebe ahụ, mgbe ahụ, ndepụta nke akara ngosi ga-abụ nnukwu ma ha ga-agagharị ọtụtụ iji chọta nke m chọrọ. Ọ bụ ezie na m ga-ekweta na usoro ịtinye ya dị mfe.
Ndị a bụ ihe ndị mere na achọghị m iji ya?
Nke ụfọdụ, mana ọ bụghị nke kachasị mkpa. Isi ihe mere achọghị m iji Ịdị n'Otu, ọ bụ n'ihi na iwu ji m Ubuntu. Enweghị m ihe ọ bụla pụrụ iche megide ọgba aghara a, mana achọghị m itinye onwe m ohu na ya maka iji ihe masịrị m. N’akụkụ a Gnome-Shell nwere uru, agbanyeghị na ọ dị Fedora, Mageia, openSUSE o Debian, anyị nwere ike iji ya na-enweghị nsogbu ọ bụla na nke ọ bụla n'ime ha. N'ezie, anaghị m aghọta etu Debian, nke bụ ebe ọ malitere Ubuntu, enweghị ike iji.
Ịdị n'Otu na-emeziwanye kwa ụbọchị na nke kacha mma Dị n'otu 2D -enweta gị ezi mmelite maka N'elu ugwu o Ubuntu 12.04, ma ụdị a na QtRuo ugbu a ọ wetaara m ụfọdụ nsogbu ka m wee kwuo na ọ ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Kedu ihe kpatara na achọghị m iji Unity?
I'vedị “Mac” na-amasịkarị m.
Otu onye ahụ gwara m ebe Malcer nwuru ọkụ "Mana ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X, emechiri emechi n'ụwa" na n'elu na-ejighị ya JAJAJAJAJA
Nke ahụ bụ nsogbu ahụ, akpọrọ m ihe doro anya asị, ọ bụ ya mere na agaghị m anwale ịdị n'otu ma ọ bụrụgodi na ha nyefere ya ndị ọzọ
Ọ bụ na maka masịrị ya, agba. Enwere ike imechi Mac, ọ bụ eziokwu, mana ihe masịrị m abụghị sistemụ, mana nhazi nke interface na nhazi nke ihe na ihuenyo. Enwere ihe dị iche.
O di nwute na ịdị n’otu chetaara m windo ọtụtụ afọ gara aga, ịdị n’otu bụ ebe enweghị ike ịhazi ya na nke ahụ adịghị mma; maka ugbua ana m arapara Linux (gnome2.3) na kwa sabayon nwere xfce.
Enwekwara m igwe na ebule 1, a chọghị m ọzọ ma masịrị ndị dị mfe na ndị nwere ike ịhazi.
Ee ee, ọ bụ otu n’ime ihe na-ewute m karịa gbasara ịdị n’otu, n’enweghị ike ịhazi ya nke ukwuu. Enweghị m ike ịkwaga n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, tinye otu panel, agbanyeghị .. Ọ na-akụda mmụọ !!!
Otu ajụjụ, ọ bụrụ na m na-eji ịdị n'otu dị ka gị, gịnị kpatara akara ngosi ịdị n'otu na-acha anụnụ anụnụ apụtaghị dị ka gị n'ozi m?
Ọzọkwa, olee otú ihe oriri si aga ịdị n'otu? Ọ bụrụ na mgbe Gnome 3 ka pụtapụtara na Ubuntu na Unity na-apụta wee rie karịa gnome na shei ya, oriri na-eri nri na-akawanye mma, olee otu Unity na-aga?
Ọfọn, n'eziokwu, alaghachiri m LMDE na Satọde, enweghị m ike inyere ya aka ^^ mana m ga-agwa gị na oriri nke abụọ ahụ dịkwa mma, ọbụlagodi na ule m mere. Aga m ahụ ma m mee post na-ekwu maka isiokwu 😀
Nhata? Nwalela ihe ngosi nke 3.2 rnn? dị mma ozugbo 3.2 bịara na mma oriri ọ bụ ezie na ha ka ga-ebuli na nke ahụ. uhm aga m echere ubuntu 11.10 ịpụta pụta wee nwalee ya ka o si arụ ọrụ.
O doro anya na anwalebeghị m RC nke Gnome 3.2. Olee otu o si aru oru? Enwere m olileanya na, na oge na-aga ha ga-ebuli ọzọ ego.
Na ịdị n'otu, enwere m ezigbo ntụsara ahụ, naanị nsogbu siri ike m na-ahụ bụ na ha anaghị ekwe ka anyị bugharịa saịtị saịtị ahụ, mana ị maara ya nke ọma, ọ bụkwa eziokwu na enweghị ike ịhazi ya mana ihe bụ anyị anaghị eji kọmpụta aga ije na-emezi ihe niile ọ bụla 2 × 3 ọ bụrụ na ịghara ime ihe na-arụpụta ihe, yana ịdị n'otu enwere m ezigbo nkasi obi ma ọ bụrụ na enwere ike gbanwee akara ngosi akara n'akụkụ ọ ga-abụ mkpuchi